के मानिस स्वाभावले नै अल्छी हुन्छन् ? | News Polar
काठमाडौं । के तपाईँले क्यालिफोर्नियाको गभर्नर कार्यालयले जारी गरेको छोटो भिडिओ हेर्नु भएको छ ? तीस लाखभन्दा बढी मानिसले हेरेको त्यो भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालभर भाइरल छ। उक्त भिडिओमा हास्य कलाकार लरी डेभिडले कृत्रिम हाँसोमिश्रित शैलीमा मानिसलाई सरकारी आदेश मानेर कोभिड(१९ फैलनबाट रोक्न घरमै बस्न आग्रह गरेका छन्।
'तपाईँहरूको समस्या के हो, मूर्खहरू ?' भिडिओमा उनी भन्छन्, तपाईँहरू दिनभरि कुर्सीमा बसेर टिभी हेर्ने गजबको अवसर खेर फालिरहनु भएको छ। हामीलाई सामान्य अवस्थामा गर्न मन नलाग्ने कामहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनीपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि धेरै शारीरिक अभ्यास गर्ने वा दैनिक धेरै तरकारी र फलफूल खाने।
अथवा कम्तीमा हामी व्यस्त हुने र आराम गर्ने अवस्थाको सन्तुलनमा खुल्छौँ। सत्य यो पनि हो कि हामी प्रायः सहज विकल्प खोजिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा लागि थोरै सहनशील भए हुने वा छोटो बाटोबाट सफलता पाइने उपाय प्रिय हुने गर्छ।
रिमोट कन्ट्रोलको छ भने किन उठेर टिभी खोल्नु ? मोटरसाइकल छ भने किन हिँडेर लिएर सुपरमार्केट जाने ? सहकर्मीले भन्दा आधा काम गरेर पुग्छ भने किन नगर्नेरु हरेकखाले काम वा प्रयासमा मानसिक र शारीरिक दबाव हुन्छ।
त्यसैले सम्भव भएसम्म मानिसहरूले काम छल्न खोज्नु स्वभाविक नै हो। के तपाईँले कुनैबेला केही पनि गर्दिन भनेर सोच्नुभएको छरु त्यो रमाइलो लाग्न सक्छ तर त्यो पनि निकै कठिन हुन जान्छ। युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियामा गरिएको एउटा चर्चित अध्ययनमा सहभागीहरूलाई पालैपालो पूरै खाली कोठमा राखिएको थियो।उनीहरूसँग फोन, पुस्तक वा टेलिभिजन केही थिएन। र उनीहरूलाई ननिदाउन भनिएको थियो। ती व्यक्तिलाई गोडामा उपकरण जोडेर १५ मिनेटसम्म एक्लै छाडियो। त्यो एकछिन आराम गर्ने अवसर थियो।
सामान्य अवस्थामा हामीले आरामलाई खासै महत्त्व दिँदैनौँ। त्यसैले यो समयमा हामीले सक्दो धेरै आराम गर्नु त आवश्यक छ नै। यसले गर्दा पुनः सामान्य दैनिकीमा फर्कँदा हामीमा काम र आरामको सन्तुलित भावना आउँछ। तर यो कठिन समयमा हामीले आफूलाई अल्छी प्रजाति होइनौ भन्ने थाहा पाउँदै छौँ।
प्रकाशित : असार २२, २०७७, १३:५८:३४